China HTD-610S Ft Socket tinyekwa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Feilifu
Mepee Tdị SOLỌ AKW SOKWỌ AKW .KWỌ
AKWOVKWỌ AKWERKWỌ (FLATOPEN)
Ewepụghị emeghe Code: NK
Ewepụghị emeghe Code: NK Panel na mkpuchi na-ahụ yiri Inwekwu nchekwa
Ihe omuma ederede maka panel, nkpuchi elu di na ala (180 Celsius) mgbe imeghe. Enwere ike iji ya maka oghere plọg pụrụ iche ma ọ bụ karịa plọg n'otu oge ahụ. Ọ nwere ike izere ọdịda nke mkpuchi mgbe ị na-ewere ike (ozi), nke na-emezi nchebe maka ngwaahịa n'oge eji.
Fig na-ewere HTD-180 oghere nkpuchi oghere uzo dika ihe omuma.Ọ dịghị ntuziaka ndị ọzọ maka ngwaahịa ndị ọzọ dị ka eserese eserese yiri ngwaahịa a.
A na-eji usoro usoro a eme ihe maka oghere mkpuchi ihe mkpuchi ala HTD-120 、 HTD-140 、 HTD-180 、 HTD-210.
Nchebe Port A na-eji ọdụ ụgbọ mmiri ThIS eme ihe maka oghere mkpuchi mkpuchi ala
DK USB oulet na-edozi HK cable tinyekwa idozi Ihe: Brass Ihe: Igwe anaghị agba nchara Ọdịdị mara mma ma dị mfe maka ọdụ ụgbọ mmiri
NKWUKWU MMAD IN
Tinyekwa echebe n'ọdụ ụgbọ mmiriSite na oghere nke nnukwu caliber, mgbe ị naghị ewere ike (ozi), ọdụ ụgbọ mmiri (ihu) na-ejikwa ụgbọ elu off1 oor socket. N'oge na-eji, na tinyekwa n'ọdụ ụgbọ mmiri (agbara) pụrụ iduga multi-str & waya USB nke n'ala anya & n'ụzọ dị irè na-echebe waya eriri akpụkpọ megide etisa.
Enweghị ụzọ ọzọ maka ngwaahịa ndị ọzọ dị ka eserese eserese ar
HTD-610S (3 modul ikike, TUV, OA nnabata)
Nke gara aga: XK-250 Ala Socket tinyekwa
Osote: FZ501 Socket Socket
Tinyekwa echebe n'ọdụ ụgbọ mmiri
Site na oghere nke nnukwu caliber, mgbe ị naghị ewere ike (ozi), ọdụ ụgbọ mmiri (ihu) na-ejikwa ụgbọ elu off1 oor socket. N'oge na-eji, na tinyekwa n'ọdụ ụgbọ mmiri (agbara) pụrụ iduga multi-str & waya USB nke n'ala anya & n'ụzọ dị irè na-echebe waya eriri akpụkpọ megide etisa.
Oghere Zoro Ezo nke Ala
Ala arịọnụ Socket Box
Ala Oghere Igbe
Plastic Ft Socket
Cketskwụ Unlọ A Na-amaghị Ama
HTD-16 Ft Socket tinyekwa
HTD-12 Ft Socket tinyekwa
HTD-120K Mepee Cover Cover Ft
HTD-2 Ft Socket tinyekwa